Ndị ọka iwu na-ahụ maka ọrụ mba ọzọ na Netherlands - Law & More
"Ọrụ a na-arụ ọrụ nke ọma mere ka ọ dịrị obere obere ụlọ ọrụ m ego. M ga-akwado ike Law & More nye ụlọ ọrụ ọ bụla dị na Netherlands. "
Ibu ọrụ nke onye were gị n'ọrụ Ọ bụrụ na onye ọrụ were ihe ọghọm n'oge ọrụ ma ọ bụ metụtara arụmọrụ nke ọrụ ya, onye were ya n'ọrụ nwere ike ịta onye ọrụ ahụ n'ọrụ maka mmebi mebiri. Nke a bụ n'ihi na onye were gị n'ọrụ nwere ọrụ pụrụ iche ọ na-elekọta mgbe a na-arụ ọrụ ahụ. Ọ ga-akwụ ụgwọ maka mmebi nke onye ọrụ metụtara n'oge ọrụ ya, belụsọ na ọ nweghị ike igosi na ọ rụzuru ọrụ nlekọta ya. Ọ bụrụ na onye were ya n'ọrụ egosiputa na ya emeela ihe niile dabara adaba iji gbochie ihe ọghọm, ọ gaghị akwụ ya ụgwọ. Ọzọkwa, n'ọnọdụ ndị e were n'ọrụ kpachaara anya ma ọ bụ kpachapụ anya, a gaghị ata onye were ha n'ọrụ ụta. Anyị na-eleba anya n'ihe niile na ọnọdụ ọ bụla ma nwee obi ụtọ inyere gị aka ma ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ dị ka onye were gị n'ọrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ijide onye were gị n'ọrụ maka mmebi mebiri.
You chọrọ ịma ihe Law & More nwere ike imere gị dịka ụlọ ọrụ iwu na Eindhoven? wee kpọtụrụ anyị site na ekwentị +31 (0) 40 369 06 80 ma ọ bụ zitere anyị ozi ịntanetị: mr. Tom Meevis, onye mgbasa ozi na Law & More - tom.meevis@lawandmore.nlmr. Maxim Hodak, onye nkwado na & More - maxim.hodak@lawandmore.nl